खेलकूद – Page 355 – Etajakhabar
‘स्पोर्टस अवार्ड’को मनोनयन सार्वजनिक
काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले यस वर्षको ‘पल्सर स्पोर्टस अवार्ड’का लागि मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ पत्रकारसम्मेलनको आयोजना गर्दै मञ्चले चार विधाका लागि मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । अवार्डका लागि हरेक विधामा पाँच÷पाँच खेलाडी मनोनयनमा परेका छन् । मञ्चका सचिव राजु घिसिङको संयोजकत्वमा गठित सात जनाको समितिले गत वर्ष अर्थात् विसं २०७२ भरि विभिन्न खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने ...
युरोकप ‘ट्रफी’ सहित पोर्चुगाली फुटबल टिम स्वदेश फर्कियो, पोर्चुगलमा भव्य स्वागत
पोर्चुगल, २८ असार । फुटबलका सुप्रसिद्ध खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसहितका खेलाडी फ्रान्समा भएको युरोकपको अन्तिम खेलमा आयोजक राष्ट्र फ्रान्सलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरी युरोकप–२०१६ उपाधि जितेर स्वदेश फर्किँदा उनीहरुको भव्य स्वागत भएको छ । फ्रान्सविरुद्ध गोल गरेपछि नै सहरका चोक–चोकमा पोर्चुगाली फुटबल टोलीको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै लाखौँ मानिसले खुशीयाली साटिरहेका बेला विशेष विमान...
प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालय खेलकुदको तयारी पूरा
काठमाडौँ, २६ असार । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले प्रथम प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । भोलि सोमबारदेखि सुरु हुने खेलकुदको तयारी पूरा भएको राखेपअन्तर्गत खेलकुद प्रतियोगिता तथा योजना विभागका प्रमुख एवम् प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव प्रकाशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । पाँच खेल समावेश प्रतियोगितामा पुरुष भलिबल र बास्क...
बंगलादेशले भन्योः नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेल गर्न सक्दैनौं
काठमाडौं, २६ असार- बंगलादेशले नेपालसँग आगामी असार ३१ र साउन २ गते हुने भनिएका दुई खेल गर्न नसकिने जनाएको छ । बंगलादेशमा अनपेक्षित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण उत्पन्न परिस्थितीको कारण देखाउँदै बंगलादेशले मैत्रीपूर्ण फुटबल गर्न नसक्ने जानकारी दिएको एन्फाले जनाएको छ । एक साताअघि बंगलादेश फुटबल संघले दुई खेल आयोजना गर्न सहमत जनाएको थियो । त्यसका लागि नेपालले त्यस खेलको लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणासमेत...
प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत प्रधानमन्त्रीले देखे मैदानमै बुल फाइटरको मृत्यु (भिडियो)
एजेन्सी । स्पेनीस बुल फाइट भनेपछि मरिहत्य गरेर हेर्नेको संख्या धेरै छ । जहाँ मैदानमा नै साँढेसँग बुल फाइटरको घम्साघम्सी अत्यन्तै रोचक हुने गर्छ । तर यो खेल हेर्दा जति रोचक छ उतनै जोखिम पनि छ । अधिकांश फाइटमा फाइटरहरु घाइते हुने गरेपनि हालै एक फाइटरको बुलको आक्रमणबाट मैदानमा नै निधन भएको छ । स्पेनको टेरुएलमा भएको बुल फाइटको क्रममा २९ वर्षीय बुल फाइटर भिक्टोर बार्रिओलाई साँढेले मैदान भित्रै सिङले...
युरोकपको फाइनल आज, फ्रान्स र पोर्चुगल मध्ये कस्ले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । युरोकप फुटबलको फाइनल खेलमा आज फ्रान्स र पोर्चुगलको दैदानी भिडन्त हुँदैछ । आज राति पौने एक बजे पेरिसको स्टेड डी फ्रान्समा हुने खेलमा दुर्व देश इीतहाँस रच्ने दाउमा छन् । आजको खेलमा बिजयी यात्रा निकाल्दै पोर्चुगल पहिलो युरोकप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ भने दुई पटकको विजेता फ्रान्स घरेलु मैदानको फाइदा लिँदै तेस्रो पटक उपाधि उचाल्ने तयारीमा छ । फ्रान्स पछिल्ला १० खेलमा अपराजित छ भने पोर्च...
फ्रान्सका किंग्सले कोम्यान हुन् तिव्र गतिमा दौडने खेलाडी
काठमाडौँ , २६ असार । युरोकप २०१६ अन्तर्गत ५० खेल सकिएका छन् । अब आइतबार प्रतियोगिताको ५१औा खेलले विजेताको टुंगो लगाउनेछ । जहाँ आयोजक फ्रान्स र पोर्चुगल भिड्दै छन् । एक खेल बाँकी छादा अहिलेसम्म एक सय सात गोल भएको छ । जुन प्रतिखेल औसत २।७ गोल हो । जारी युरोकपमा प्रत्येक ४३ मिनेटमा एक गोल हुने गरेको छ । सबै खेलमा खेलाडीहरू गोल गर्नका लागि तीव्र गतिमा दौडने गरेका छन् । जारी युरोकपमा सबैभन्दा तीव्र ...
यसकारण घट्यो यूरोकपको स्तर
काठमाडौँ , २६ असार । जर्मनीका प्रशिक्षक जोचिम लो तथा डिफेन्डर माट्स हुमल्सले युरोकपमा २४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हँुदा स्तर घटेको बताएका छन् । युरोकप २०१६ अन्तर्गत आयोजक फ्रान्ससँग २–० ले पराजित हुँदै सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि लोको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो । लोले भनेका छन्, ‘२४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा फुटबलको गुणस्तरमा कमी आएको छ ।’ यसअघिका संस्करणमा १६ राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा हुने यु...
गोलरक्षक पिटरले सन्न्यास लिए
काठमाडौँ । आर्सनल तथा चेक रिपब्लिकका गोलरक्षक पिटर चेकले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्न्यास लिएका छन् । चालू युरोकपमा चेक रिपब्लिक पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको थियो । चेककै लिजेन्ड गोलरक्षकका रूपमा हेरिने पिटरले युवा खेलाडीलाई स्थान दिन सन्न्यास लिएको बताएका छन् । चेककै लिजेन्ड अन्तर्राष्ट्रिय र क्लबस्तरीय फुटबलमा पिटरले विशेष स्थान बनाएका छन् । वर्तमान समयमा पिटर चेककै लिजेन्ड हुन् । उनले चेकबाट सर्व...
स्व. पत्रकार सूर्यकुमार क्षेत्रीको स्मृतीमा अन्तर मिडिया कप हुने
काठमाडौँ, २५ असार । पत्रकार सूर्यकुमार क्षेत्री प्रथम राष्ट्रिय अन्तरमिडिया कप फुटसल प्रतियोगिता–२०७३ आगामी साउन १० गतेदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगिता स्व पत्रकार क्षेत्रीका छोराको पढाइका लागि सहयोगार्थ हुन लागेको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक गोलपोष्ट स्पोर्टस् एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर भैँसेपाटीले जानकारी दिएको छ । तीनदिने प्रतियोगिताका खेल फुटसल मैदान भैँसेपाटीमा हुनेछन् । सेन्टरका प्रब...
-20462 second ago
-20134 second ago
-19448 second ago
-19066 second ago
-17996 second ago
-17252 second ago
-16609 second ago
-16254 second ago